I-villa yendlela yakudala enedama lokuqubha - I-Airbnb
I-villa yendlela yakudala enedama lokuqubha
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguAnis
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAnis iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Oncomekayo Nedlac villa ilitye endala-isimbo, ukuba owakho pool wayo lokudada yabucala, indawo igadi kunye kwiindawo zoxolo ayo, yonke ebusweni, loo nto kwakhona ibe ukuwasa enkulu yinxalenye open wophahla, efanelekileyo zokumthanda iinkwenkwezi usapho, akhiwe 500 iimitha ukusuka elwandle kwaye kufutshane neevenkile, ukuzola kunye nokuzola kuqinisekisiwe, kwianecdote UMnu noNksk Balsolier baqesha iintsuku ezi-2 kwaye bahlala iinyanga ezi-6.
I-Villa ixhotyiswe ngezinto eziyimfuneko zobomi (ifriji, i-hob, njl.).
Le villa inegumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, indlu yangasese, kunye namagumbi okulala amathathu anomoya opholileyo, elinye lawo linika ukufikelela ngokuthe ngqo kwidama lokuqubha ngocango lweglasi etyibilikayo, kunye nelinye igumbi lokulala elinamagumbi okulala amathathu. yangasese ngokwayo / yangasese (kweli gumbi: shicilelo of 20 € ngaphezulu ngamnye ngosuku).
I-villa ixhotyiswe ngezinto ezisisiseko zobomi: ifriji, umatshini wokuhlamba, i-hob, i-crockery yazo zonke iintlobo, i-microwave, i-blender njl.
Indawo enkulu ebanzi ejikeleze i-villa,
i-terrace enkulu enophahla oluyi-semi-covered.
Idama lokuqubha elinomda wegadi encinci enoxolo, indawo yokosa inyama, ngaphandle kwamehlo.
Kubo bonke abahambi abongezelelweyo, intlawulo ye-10 € ngomntu ngamnye kulindeleke.
4.23 · Izimvo eziyi-13
Le villa ise 500 kusuka elwandle, apho kukho kwakhona iqela iti igumbi / yokutyela ngaselwandle kunye park yayo izilwanyana ezincinane, kufutshane ezivenkileni, Djerba-Zarzis moya yimizuzu eli-10 kude, ibekwe ngaphantsi km ukusuka kwizibuko Ajim kunye iindawo zokutyela ezahlukeneyo ezibandakanya iintlanzi ezintsha ezaziwa njengezona zibalaseleyo kulo lonke elaseTunisia.
Iilwimi: العربية, Français
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Djerba